Real Madrid oo garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul kaga gaartay kooxda Celta Vigo… +SAWIRRO – Gool FM
(Madrid) 03 Jan 2021. Real Madrid ayaa garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul kaga gaartay kooxda Celta Vigo, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid.
Daqiiqadii 6-aad Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 1-0 ka dhigay xiddigooda reer Spain ee Lucas Vazquez, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Marco Asensio.
Daqiiqadii 53-aad Real Madrid ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta kaddib markii uu 2-0 ka dhigay Marco Asensio, waxaana goolkan si qurux badan kaga caawiyay Lucas Vazquez.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Real Madrid kaga adkaatay kooxda Celta Vigo oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano, Los Blancos ayaa si ku meel gaar ah hoggaanka ugu sii qabatay kala sareynta horyaalka Spain.